Siyaasiinta qaata mushaharada ugu sarreeya Iswiidhen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Siyaasiinta qaata mushaharada ugu sarreeya Iswiidhen
La daabacay måndag 3 juni 2013 kl 15.24
Sawirle: Rebecca Sutton/P4 Skaraborg Sveriges Radio.
Siyaasiinta mushaharadoodu aadka u sarrayso waxaa ka mid ah hoggaaminaya Jimmie Åkesson oo hoggaamiya xisbiga Sverigedemokraterna iyo Björn Söder oo isna ka mid madaxda xisbigaas. Sidaas waxaa lagu muujiyey baaritaan uu telefishanka SVT ku sameeyey xisbiyada dalka ka jira.
Xisbiga Sverigedemokraterna wuxuu ka mid yahay xisbiyada yaryar ee ku jira baarlamaanka. Marka laga eego xagga xubnaha xisbiga ka tirsan wuxuu Sverigedemokraterna noqonayaa xisbiga ugu yar xisbiyada ku jira golaha baarlamaanka. Sidaas oo ay tahay ayuu hoggaamiyaha xisbigu Jimmie Åkesson xisbigiisa ka qaataa mushaharka labaad ee ugu badan oo xisbi bixiyo.
Waxaa mushaharka ugu badan qaata hoggaamiyaha xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga. Maadaama uusan hoggaamiyaha xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga Stefan Löfvén xubin ka ahayn baarlamaanka oo uusan mushahar ka qaadan, wuxuu xisbigiisu siiyaa mushahar u dhigma laba mushahar oo ay qaataan xubnaha baarlamaanku.
Jimmie Åkesson wuxuu mushaharka baarlamaanka ka sokow xisbigiisa ka qaataa mushahar dheeraad ah oo ku dhow 38 000 oo karoon, taas oo isku noqoneysa 1.1 milyan oo karoon sannadkii.
Mushaharka labaad oo xisbi laga qaato waxaa qaadata hoggaamiyaha xisbiga Dhexe Annie Lööf oo bishiiba ay xisbiga ka soo gasho 37 000 karoon, muashaharkaas oo ka baxsan mushaharka ay ku qaadato wasiirnimada.
Xoghayaha xisbiga Sverigedemokraterna Björn Söder ayaa ka mid noqonaya xoghayayaasha xisbiyada ee ugu mushahar sarreeya. 700000 oo karon oo uu sannadkii u qaato mushahar baarlamaan ka sokow, wuxuu xisbigiisa ka qaataa 350000 karoon sannadkii oo mushahar ah.